Sekoly tsy miankina : 32 ny toeram-pampianarana ho paramédicaux ara-dalàna | NewsMada
Sekoly tsy miankina : 32 ny toeram-pampianarana ho paramédicaux ara-dalàna
Hihaona sy hidinika miaraka amin’ny mpitantana ny ivotoeram-panofanana paramédicaux 32 manana ny « habilitation » sy ireo rehetra tsy manara-penitra ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka atsy ho atsy. Hampahafantatra ny lalàna sy ny fepetra rehetra takiana amin’ny fananganana toeram-pampianarana ny tomponandraikitra mandritra izany. « Aorian’izay, hidina ifotony hijery akaiky ny sekoly ara-dalàna ny minisitera ary handray fepetra hentitra », araka ny fanazavan’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Tanjona ny hanaovana fanadinana tokana ho an’ny ivotoeram-pampianarana paramédicaux rehetra manerana ny Nosy, na miankina amin’ny fanjakana na tsia. Mitaky fepetra efatra ny fanokafana sekoly ambony : mpampianatra manana ny fari-pahaizana takiana, fotodrafitrasa handraisana ny mpianatra, ny fitaovana kirakiraina ao anatiny ary ny fandaharam-pianarana atolotra ny mpianatra. Indraindray, mahavita manome vola ireo mpampianatra eny amin’ny oniversite ny tompon’ny sekoly mba hampidirina ao anatin’ny antontan-taratasy momba ny sekoly ny anarany, ho antoka amin’ny fahazoan-dalana hisokatra. Tsy vitsy koa ny manofa fitaovana rehefa handalo ny mpanara-maso ny sekoly…
Tokony hanana toeram-pitsaboana ahafahany manao fianarana asa koa ny sekoly mampianatra « paramédicaux », satria zava-dehibe ny fampiharana sy fizarana asa. Tsy maintsy mahazo fahazoan-dalana avy any amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny sekoly vao afaka mandefa mpianatra asa, eny amin’ny CSB na hopitalim-panjakana.
Nandritra ny fifaninanana nandraisana infirmier sy mpampivelona 500 avy amin’ny sekoly tsy miankina farany teo, tsy voafehin’ny mpiadina mihitsy ny pharmacologie sy ny santé publique. Vitsy ny mpampianatra malagasy mahafehy ny taranja pharmacologie ka matetika manafatra mpampianatra any ivelany mihitsy ny fakiolten’ny fianarana ho mpitsabo rehefa mila izany. Tokony hanaraka io fepetra io koa ny sekoly tsy miankina satria ain’olona no raisina an-tanana.